ကော်စတာရီကာသို့ ခရီးသွားခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ- စာရွက်စာတမ်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အစာအိမ်ဆိုင်ရာ | ခရီးသွားသတင်း
Costa Rica သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ
လူးဝစ် Martinez | | အကြံပေးချက်များ, ကော့စတာရီကာ
အ Costa Rica သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ ဗဟိုအမေရိကနိုင်ငံ တွေ့ကြုံနေရသော ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ အရှိန်အဟုန်ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ယခင်ကထက် ပိုမိုလိုအပ်လာသည်။ ၎င်း၏သဘာဝအံ့ဖွယ်များ၊ သာယာသောရာသီဥတု၊ ကမ်းခြေကိုစိတ်ကူးယဉ်ပါ နှင့်၎င်း၏ကြိုဆိုလူဦးရေ။
အရင်တုန်းကတော့ ရှိတယ်။ အမျိုးသားဥယျာဉ် သုံးဆယ်ခန့်ရှိသည်။ အမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစားအားလုံး။ ဥပမာအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Arenal မီးတောင်၊ Ballena ပင်လယ် သို့မဟုတ် ကိုကိုးကျွန်းကို ဖော်ပြပါမည်။ တစ်ဖက်ကလည်း ရာသီဥတုဗေဒအရပေါ့။ အပူပိုင်းတစ်နှစ်ပတ်လုံး အလားတူ အပူချိန်နှင့် မိုးရာသီ ကြာမြင့်သည်။ မြို့သူမြို့သားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်း၏ ဆောင်ပုဒ်သည် ကျော်ကြားလာသည်။ "ဖြူစင်သောဘဝ" သူ့ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အကောင်းမြင်ဝါဒရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ ဤအကြောင်းများကြောင့် ကော်စတာရီကာသို့ ခရီးသွားရန် အကြံဉာဏ်အချို့ ပေးရန်လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ပါသည်။
2 ခရီးဆောင်အိတ် နှင့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန်
3 Costa Rica သို့ ခရီးသွားရန် အကောင်းဆုံးအချိန်
4 အစားအသောက်အကြောင်း ကော်စတာရီကာသို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ
5 ကော်စတာရီကာရှိ ရှောင်လွှဲ၍မရသော လည်ပတ်မှုအချို့
5.2 Costa Rica သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ- အမျိုးသားဥယျာဉ်များ
San José၊ Costa Rica ရှိ Paseo de Colón
ကော်စတာရီကာသို့ မဖြစ်မနေ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် မရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အကြံပြုတာတွေရှိတယ်။ အတိအကျပြောရရင် ကာကွယ်ဆေး အသည်းရောင် A နှင့် Bယင်း မေးခိုင်နှင့် ဆုံဆို့နာ နှင့် အူရောင်ငန်းဖျားဖျားနာ. COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ မလိုအပ်သော်လည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အကြံပြုထားပါသည်၊ မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့လိုအပ်လိမ့်မည်၊ ကျန်းမာရေးအာမခံ နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန်နှင့် နေရာအများအပြားသို့ ဝင်ရောက်ရန် ကာကွယ်ဆေးထိုးလက်မှတ်ကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကပ်ရောဂါ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကော်စတာရီကာနှင့် စပိန်တို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးအာမခံကိုလည်း ထုတ်ယူရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ သူတို့မှာ ကျန်းမာရေး သဘောတူညီချက်တွေ မရှိဘူး။. ထို့ကြောင့် ဖျားနာပါက စရိတ်စက ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဖက်ကလည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းတဲ့ ကျေးလက်ဒေသကလွဲရင်၊ ရေကသောက်သုံးရန်သင့်ပါသလား ဗဟိုအမေရိကနိုင်ငံ၌။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Tortuguero အပိုင်းတွင် သင်သည် ၎င်းကို မယူသင့်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားရန် ရေသန့်ဘူးများကို အမြဲသောက်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကောင်းဖို့လည်းလိုတယ်။ ခြင်တွန်းလှန်. ကော်စတာရီကာတွင် အများအပြားရှိပြီး အချို့မှာ ရောဂါကူးစက်သူများဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် ညဘက်မှာလည်း လက်ရှည်ဝတ်ပါ။
ခရီးဆောင်အိတ် နှင့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန်
ပထမအချက်အနေဖြင့်၊ သင်၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ငွေများကို ခိုးယူခြင်းမပြုနိုင်စေရန် သိမ်းဆည်းထားရမည့် ယေဘုယျစည်းမျဉ်းဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြဲဆောင်ထားပေးပါ။ သင်၏ပတ်စပို့မိတ္တူ ပျောက်ဆုံးမှု သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရမှုတွင် ပြသရန်။
သယ်ရတာလည်း အဆင်ပြေတယ်။ အနွေးထည်အချို့. ရာသီဥတုကောင်းသော်လည်း ကော်စတာရီကာတွင် ဧရိယာတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းသွားသည်။ ကမ်းခြေများတွင် သုံးဆယ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိနိုင်သော်လည်း အတွင်းပိုင်းနေရာများတွင် အပူချိန်တစ်ဝက်တွင် သင့်ကိုယ်သင်တွေ့နိုင်သည်။ ဖိနပ်အတွက်၊ ကမ်းခြေအတွက် flip-flops နှင့် တောင်တက်လမ်းများအတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဖိနပ်နှစ်မျိုးကို ယူပါ။
ထို့အပြင် သင်၏ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲတွင်aပါဝါ adapter ကို. ဗဟိုအမေရိကနိုင်ငံ၌ ပလပ်များသည် A/B အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဥရောပတွင် ၎င်းတို့သည် C ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အီလက်ထရွန်နစ်စက်ပစ္စည်းများကို အားသွင်းရန်အတွက် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကော်စတာရီကာသို့ဝင်ရောက်ရန်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လို့ ခေါ်တယ်။ ကျန်းမာရေး passနိုင်ငံ၏ အစိုးရ ကျန်းမာရေး ပေါ်တယ်များ (https://salud.go.cr/) မှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ အလားတူပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ကာကွယ်ဆေးမထိုးပါက ဆေးအာမခံကို ထုတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကလည်း 18 နှစ်အောက်များအတွက်မဖြစ်မနေဒါပေမယ့။
Costa Rica သို့ ခရီးသွားရန် အကောင်းဆုံးအချိန်
Cahuita အမျိုးသားဥယျာဉ်ရှိ Playa Blanca
ရာသီဥတုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်က ရှင်းပြခဲ့သမျှထဲက အလယ်ပိုင်းအမေရိကနိုင်ငံကို သွားလည်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က ခြောက်သွေ့ရာသီလို့ တွက်ဆလို့ရပါလိမ့်မယ်။ သူ နိုဝင်ဘာလမှ ဧပြီလအထိ. ဒါပေမယ့် မိုးရာသီမှာ ခရီးသွားရင် တခြားအပူပိုင်းဒေသတွေမှာ ဖြစ်တတ်သလို ရေက တစ်နေ့လုံး ကျသွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ မိုးရွာနိုင်ခြေ ပိုများသော်လည်း ခြောက်သွေ့သောရက်များလည်း ရှိသည်။ နောက်ပြီး ရာသီကုန်ရင် ဈေးပိုသက်သာတယ်။
လုံခြုံရေးအရ ကော်စတာရီကာကပါ။ အတော်လေးတိတ်ဆိတ်. သို့သော် ညဘက်တွင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော မြို့ကြီးများတွင် နေရာများရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ San José သို့မဟုတ် Puerto Limón အချို့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတိထားပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်သည်။ အူမကြီး ခရီးမထွက်ခင် ကိုင်ထားဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် Costa Rica ရှိ ငွေလဲအိမ်များကို ရှာဖွေရန် ရှောင်လွှဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင် နိုင်ငံခြားတွင်အသုံးပြုသောအခါ အကြွေးဝယ်ကတ်အများစုသည် အခကြေးငွေများစွာကောက်ခံကြောင်း သတိပြုပါ။
ဒါပေမယ့် တချို့ဘဏ်တွေက ကမ်းလှမ်းတယ်။ ခရီးသွားကတ်များ သူတို့မရှိလို့၊ ထို့အတူပင် ဒေါ်လာနှင့် ယူရိုငွေကိုပင် လက်ခံသည်။. သို့သော် ဤအရာများထဲမှ တစ်ခုခုဖြင့် ငွေပေးချေပါက အကောင့်သည် အနည်းငယ်ပို၍ ဈေးကြီးလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင့်ဘေးကင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင့်မှာရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ လမ်းများကိုသတိထားပါ။. ဗဟိုအမေရိကနိုင်ငံ၌ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုသည် ဖရိုဖရဲဖြစ်ပြီး မှားယွင်းသောအကွေ့များ သို့မဟုတ် ကျော်တက်ခြင်းကို မြင်တွေ့ရခြင်းမှာ အဆန်းမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကားငှားလိုပါက သတိထားပါ။ ဤသဘောအရ၊ ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်ရန် ၎င်းကို ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။ နေရာမရွေးရရှိနိုင်ရန် ပြည့်စုံသောအာမခံဖြင့်4x4အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
အစားအသောက်အကြောင်း ကော်စတာရီကာသို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ
Gallo pinto တစ်ပန်းကန်
အလယ်အမေရိကနိုင်ငံရဲ့ အစားအစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံး အကြံပြုချင်တာကတော့ ပိုက်ဆံနည်းနည်းလေးနဲ့ ကောင်းကောင်းစားချင်ရင်၊ ဆိုဒါ. ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အရသာရှိသော ဟင်းလျာများနှင့် ချိုသာသောစျေးနှုန်းများဖြင့် ဒေသတွင်း စားသောက်ဆိုင်ငယ်များဖြစ်သည်။
အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင် Costa Rica က အရသာရှိတယ်။ ၎င်းသည် ဇာတိ၊ မြေထဲပင်လယ်အစားအစာနှင့် အာဖရိကဒြပ်စင်အချို့၏ ပေါင်းစပ်မှုရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးကတော့ သူတို့ထဲက တချို့ကို ငါတို့ မင်းကို ပြလိုက်တာဘဲ ပုံမှန်ဟင်းလျာများ အရသာအရှိဆုံးမို့ စမ်းကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ကော်စတာရီကာသို့ ခရီးသွားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပြုချက်များသည် ၎င်း၏ အစာအိမ်အကြောင်း သင့်အား မပြောပါက မပြည့်စုံပါ။
ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် ကြက်ဖပြောက်နံနက်စာအတွက် ပြုလုပ်ထားသော်လည်း နေ့စဥ်အချိန်မရွေးစားသုံးနိုင်သောကြောင့် လူကြိုက်များသည်။ နာမည်ရှိသော်လည်း ကြက် သို့မဟုတ် ကြက်မ ဆောင်ထားပါ။ ထမင်း၊ ပဲ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးအချို နှင့် cilantro တို့ကို ရောစပ်ပြီး တစ်မျိုးတည်းစားရန် သို့မဟုတ် အခြားဟင်းလျာများအတွက် အလှဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ သံသယမရှိဘဲ၊ ၎င်းသည် ဤလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံ၏ ထုံးစံအရှိဆုံး ဟင်းချက်နည်းဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် သူက နာမည်ကြီးတယ်။ casadoအရင်ကထက် အများကြီး ပိုပြင်းထန်တယ်။ အမှန်တော့၊ အဲဒါက ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အစားအစာလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဝက်သား သို့မဟုတ် အမဲသားကဲ့သို့သော အသားအမျိုးအစားအချို့ကို အခြေခံထားသော်လည်း ၎င်းကို ငါးနှင့် အစားထိုးနိုင်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီး သို့မဟုတ် ပဲပိစပ်ဖြင့်ပင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတွင် ဟင်းခတ်ဆန် သို့မဟုတ် ခေါက်ဆွဲ၊ ကြက်ဥနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ထုတ်ကုန်များ ပါဝင်သည်။
မင်းတွေ့ရလိမ့်မယ် ဆန် ၎င်းသည် Tico အစားအစာ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ အစရှိတဲ့ အခြားသော ဟင်းပွဲများစွာအတွက်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ ထန်းလျက်နှင့် ထမင်းစွန်ပလွံပင် အမျိုးအစားဖြစ်သည့် ပီလီဘေယေ၏ အဖူး သို့မဟုတ် နှလုံးနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒါပေမယ့် အသုပ်တွေ၊ အသားတုံးတွေနဲ့ ခါးပေါင်မုန့်တွေကလည်း အရမ်းပုံမှန်ပါပဲ။
မိမိအစိတျအပိုငျးအဘို့, Chifrijo ၎င်းတွင် ဝက်သားခွံ၊ ဆန်၊ ပဲ၊ ထောပတ်သီးနှင့် ပြောင်းဖူး tortillas များ ပါဝင်ပြီး အားလုံးသည် chimichurri-type ဆော့စ်ဖြင့် အရသာရှိပါသည်။ ပြီးနောက် creole စွပ်ပြုတ် ၎င်းတွင် အသားများ၊ ဝက်အူချောင်းများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကုလားပဲ၊ ပြုတ်ဥ၊ သံလွင်သီး၊ ဇီးသီး သို့မဟုတ် စပျစ်သီးစပျဉ်၊ ကြက်သွန်နှင့် ငရုတ်သီးချိုများ ပါရှိပါသည်။
ယင်းကြောင့် ဟင်းချိုကျွန်ုပ်တို့သည် ပေါက်ကရ သို့မဟုတ် အသားလုံးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုပါသည်။ မက်လီပဲစိမ်းမုန့်စိမ်းနဲ့ ပီလောပီနံနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မုန့်စိမ်းလေးတွေက အရသာရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့လည်း အရမ်းနာမည်ကြီးတယ်။ ထမ်းပိုးဒိန်ခဲ၊ အသား သို့မဟုတ် ကြက်သားပါသည့် ၎င်းနှင့်ပြုလုပ်ထားသော အချို့သော croquettes။
ကော်စတာရီကာရှိ ရှောင်လွှဲ၍မရသော လည်ပတ်မှုအချို့
Costa Rica သို့ ခရီးသွားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပြုချက်များကို အပြီးသတ်ရန်အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်သော အချို့နေရာများအကြောင်း အကျဉ်းချုပ် ပြောပြပါမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့က မြို့တော်နဲ့စပြီးတော့ ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကို ထောက်ပြမယ်။
San Jose ရှိ Costa Rica အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ
1738 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ကို အနှံ့အပြားတွင် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ဖော်ပြထားသည်။ ယဉ်ကျေးမှုရင်ပြင်၊ သင်မြင်နိုင်သောနေရာ အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံOpera ၏ပုံတူဖြစ်သည်။ ပဲရစ်, အ ရွှေပြတိုက်. သို့သော် San Jose ၏ ရှုထောင့်မှ အထူးခြားဆုံးမှာ ၎င်းဖြစ်သည်။ နီယိုဂန္တဝင်ပုံစံ အဆောက်အဦများအများအပြားပါဝင်ပါတယ်။ အမွန်ရပ်ကွက်အခြားသူများနှင့်အတူ အမျိုးစုံ နှစ်ဆယ်ရာစုအစောပိုင်း၏ နှောင်းပိုင်းတို့တွင်၊ အဆိုပါ Moor ၏ရဲတိုက်ခံ့ညားသော၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းအဆောက်အအုံ (also neoclassicist) သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်စင်တာမှာ.
၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, neoclassical လည်းပါဝင်သည်။ အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံ နှင့် Catedral MetropolitanaXNUMX ရာစုအစတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်တွင် အခြား လှပသော ဘုရားကျောင်းများ ကိုလည်း သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ La Merced နှင့် La Soledad တို့၏ Lady ဘုရားကျောင်းများ.
Costa Rica သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ- အမျိုးသားဥယျာဉ်များ
Arenal Volcano အမျိုးသားဥယျာဉ်
ကျန်တဲ့ ဗဟိုအမေရိကနိုင်ငံတွေမှာတော့ လှပတဲ့မြို့တွေလို လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ Cartagoအသက်အကြီးဆုံး၊ Puerto Limon၎င်း၏ အရေးကြီးဆုံး ဆိပ်ကမ်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မွန်ဗာဒီEcotourism အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော၊ AlajuelaCentral Cordillera အနီးတစ်ဝိုက်၊ သို့မဟုတ် Puntarenasပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအစွန်းတွင်၊
ဒါပေမယ့် Costa Rica ရဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့ ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုကတော့ သူ၏သဘာဝဖြစ်သည်. ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ အမျိုးသားဥယျာဉ်ပေါင်း သုံးဆယ်ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ဖော်ပြထားသည်မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ Corcovado ၏. ၎င်း၏တည်နေရာသည်အတော်လေးဝေးသော်လည်း၊ ၎င်းသည် Osa ကျွန်းဆွယ်တွင်တည်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အိမ်များဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုလည်ပတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့တစ်ခုတည်းသော အပူပိုင်းမိုးသစ်တော.
ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသည်။ Ballena Marine အမျိုးသားဥယျာဉ်. ၎င်း၏အမည်အရ နို့တိုက်သတ္တဝါကြီးများဖြစ်သည့် humpback ဝေလငါး သို့မဟုတ် အစက်အပြောက်နှင့် နှာစေးသောလင်းပိုင်များ၊ ရေငုပ်ခြင်းကဲ့သို့ နို့တိုက်သတ္တဝါကြီးများကို သင်တွေ့နိုင်သည်။
အလွန်ကွဲပြားသော စရိုက်လက္ခဏာ ရှိသည်။ Rincon de la Vieja အမျိုးသားဥယျာဉ်ခြေလျင်တက်နိုင်သည့် ထိပ်သီးမီးတောင်နှင့် နီကိုယာကျွန်းဆွယ်နှင့် နီကာရာဂွာရေကန်တို့ကို စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ရှုခင်းများမြင်နိုင်သည့် တူညီသည့်အမည်တူ မီးတောင်ကြောင့် ၎င်း၏အမည်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။
တိုတိုပြောရရင်၊ တခြားပန်းခြံတွေလို အကြံပြုနိုင်တယ်။ လိပ်ပင်လယ်လိပ်တွေရဲ့ အသိုက်အမြုံကို မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ နေရာ၊ Arenal မီးတောင်၏အဆိုပါ ချင်း သို့မဟုတ် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုTalamanca တောင်တန်း၌။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အားအချို့ကို ပေးထားပါသည်။ Costa Rica သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ. ဒါပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှပဆုံးနဲ့ ဧည့်ခံဖို့ ကျော်ကြားတဲ့ အလယ်အမေရိကနိုင်ငံလေးမှာ သွားလည်သင့်တဲ့ နေရာအချို့ကိုလည်း ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » ကော့စတာရီကာ » Costa Rica သို့ ခရီးသွားရန် အကြံပြုချက်များ